> Resource > Video > HD Video sameeyey, Sida loo sameeyo HD Video ah
Mar walba doonayay in la sameeyo video oo tayo sare leh oo la isticmaalayo sawiro ama video oo aad naftaada ku toogtay laakiin ma uu ogayn meel ay u bilaabaan? Waa hagaag, ma ahan sidaas u adag oo wax loo baahan yahay in la isticmaalo software adag oo qaali ah sida Adobe jilitaankii ama Final Cut Pro. Video Editor leeyahay oo dhan aad u baahan tahay si ay u abuuraan saarka HD video aad rabto. Hagaha soo socda ee hoos ku tusiyaa doonaa sida loo sameeyo video HD ah iskaa. Ma danaynaysaa? Ha!
1 dejinta sawirkaaga ama video files
Orod Video Editor oo uu ka soo xusho "16: 9" ama "4: 3" ratio sida ay baahidaada. Markaas riix batoonka "Import" on Toolbar ah, hadal soo booda tahay doorashada video ama sawir files barnaamijka. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files ee barnaamijka. Markaas clips xushay lagu shubto doonaa goobta shaqada ee Video Editor ah.
2 dar dambe ku taaban gaarka ah si ay video ka
Markaas jiidi aad video clips ama sawiro si waqtiga. Jadwalka ku siinayaa awood badan ku dhererka clips, video iyo kuwan raadkaygay audio, iyo kala guurka iyo saamaynta. Hadda waxaad ku dari kartaa dambe ku taaban gaarka ah si ay video HD ah.
Video Editor Soo bandhigayaa qani ku ah hawlaha video tafatirka. Waxaad si fudud u dajiyaan karaa oo dar file music in waqtiga Music ama record iyo dar aad voiceover u gaar ah si ay waqtiga audio. Ka sokow in, tani waa mid xaqiiqdii sahlan in lagu daro horyaalka ah, kaliya riix "Text" button, doortaan qaab iyo geli erayadaada.
Guurka waa shey muhiim ah oo ah wax kasta oo video, si loo yareeyo hal goobta kale. Si fudud waxaad ka dalban kartaa saamaynta guurka adigoo gujinaya ah "guurka" button. Waxaad arki doontaa oo dhan kala-guurka ee laga heli karo agagaarka shaqada. Jiid hadba mid aad rabto galay kala guurka ku haboon u dhexeeya video clip kasta ee Jadwalka ka.
3 dhoofinta aad HD video
Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay in la badbaadiyo HD video ama daabacaan waxaa dunida si aad u aragto! Guudmar shaqadaada. Haddii aad ku qanacsan tahay shaqada, dooro "Abuur" gudahood Video Editor. Riix ah "YouTube" tab ah si loo badbaadiyo, la moodo oo geliyaan aad video. U hubso in aad ku daray sharaxaad faahfaahsan iyo smart tags aad video ku saabsan. Sax "Share to Facebook" iyo "Share Twitter", waxaad la saaxiibo on Facebook iyo Twitter waxa ay sidoo kale la wadaagi karto. Waxa kale oo aad ku badbaadin kartaa video qaabab kala duwan oo la beddelo goobaha sare si ay u sii ama u gubato si DVD ah ee wadaagga ah ee DVD ciyaaryahanka.
Daawo video tutorial hoos si ay u bartaan sida loo sameeyo video HD ah: